Inani leNkundla ePhakamileyo kwiNkundla kaMongameli-Uluhlu
Inani leeNkundla eziPhakamileyo zeNkundla nguMongameli
UMongameli uBarack Obama wanyula ukhetha amalungu amabini eNkundla ePhakamileyo yase - United States kwaye unelungelo lokonyula okwesithathu ngaphambi kokuphela kwexesha lakhe emva ko-2016 . Ukuba unako ukunyusa umviwa ngeyiphi into enokuthi ityala lombutho wezopolitiko kwaye ngamanye amaxesha , u-Obama uya kukhetha inxalenye yesithathu kwinkundla yesigidi esithoba.
Ngoko yinto encinci kangakanani?
Zingaphi izihlandlo umongameli wanamhlanje athola ithuba lokukhetha amagosa amathathu?
Nguwuphi na oomongameli abakhethileyo kwiiNkundla eziPhezulu zeNkundla eziPhakamileyo kunye nefuthe elikhulu kwi-court of land?
Nazi ezinye iimpendulo kunye nezimpendulo malunga nenani leNkundla ePhakamileyo yonyulwa ngumongameli.
U-Obama wafumana njani ithuba lokunyula amagosa amathathu?
U-Obama wakwazi ukuphakamisa amagosa amathathu ngenxa yokuba amalungu amabini eNkundla ePhakemeyo ahlala phantsi kwaye umntu wesithathu wafa eofisini.
Umhlalaphansi wokuqala, lowo woBulungiswa uDavid Souter, weza ixesha elifutshane emva kokuba u-Obama athathe isikhundla ngo-2009. U-Obama wakhetha u-Sonia Sotomayor, oza kuba ngumlingani wokuqala wase-Hispania kunye nomfazi wesithathu wobulungisa ukukhonza kwinkundla ephakamileyo.
Ngonyaka kamva, ngo-2010, uJaji uJohn Paul Stevens washiya isihlalo sakhe enkundleni. U-Obama wathabatha u-Elena Kagan, owayengumfundisi we-Harvard Law School kunye nommeli-jikelele we-United States owabonakala ngokubanzi "njengenkululeko yokubambisana."
NgoFebruwari 2016, uBulungisa u-Antonin Scalia wasweleka ngokungalindelekanga.
Ngaba Kukho Umoya Ukuba uMongameli Afune Ukukhetha Amalungelo Amathathu?
Enyanisweni, akukho. Akunjalo loo nto inqabile.
Ukususela ngowe-1869, unyaka weCongress wandisa inani lezigwebo ukuya kubayisithoba, abali-12 babongameli abengaphambi kuka-Obama baphumelela bakhetha ngamalungu amathathu eNkundla ePhakamileyo. Umongameli osandul 'umva kutsho ukuba athathe izigwebo ezintathu kwinkundla ephakamileyo nguRonald Reagan, ukususela ngo-1981 ukuya ku-1988.
Enyanisweni, omnye wabatyunjelwe, uJaji u-Anthony Kennedy, waqinisekiswa kunyaka-lonyulo woongameli, ngo-1988.
Ngako-ke kutheni ama-3 abo baqeshwe ngu-Obama?
Ukuthi u-Obama wayenethuba lokutyunjwa izigwebo ezintathu zeNkundla eziPhakamileyo kwakungekho, ngokwalo, ibali elikhulu. Isikhathi - iinyanga ezili-11 zokugqibela e-ofisi - kwaye igalelo lakhe eliya kuba nalo ekubekeni inkambo yeengcamango enkundleni kwiminyaka emininzi ezayo yenze ukhetho lwakhe lwesithathu njengeendaba ezinkulu zeendaba kwaye, ngokuqinisekileyo, ibhola lezopolitiko ngonaphakade.
Ibali edibeneyo: Yiyiphi ithuba lika-Obama lokutshintsha iScalia?
Nguwuphi u Mongameli okhethileyo iNkundla ePhakamileyo yeNkundla?
UMongameli uFranklin Delano Roosevelt wafumana abatyunjwa bakhe abasibhozo kwiNkundla ePhakamileyo kwiinyanga ezintandathu kuphela eofisini. Abaongameli kuphela abasondeleyo nguDwight Eisenhower, uWilliam Taft kunye no-Ulysses Grant, ngamnye owamenyulo abathathu enkundleni.
U-Obama 3 Khetha njani Uthelekisa nabanye abaMongameli?
Ngeentlawulo ezintathu kwiNkundla ePhakamileyo, u-Obama ulingene. Abameli abangama-25 ukususela ngo-1869 baye bathola abaphakanyisiweyo abangama-75 kwintendelezo ephakamileyo, oku kuthetha ukuba umyinge ngamagosa amathathu kumongameli.
U-Obama uwela ngqo phakathi.
Nalu uluhlu lwabaongameli kunye nenani leenkundla zabo zeNkundla eziPhakamileyo ezizenzele enkundleni ukususela ngo-1869.
Uluhlu lubekwe kwii-ofisi kubaongameli kunye nabanamalungelo amaninzi kulabo bancinci.
UFranklin Roosevelt : 8
UWilliam Taft: 5
Ulysses Grant : 5
URichard Nixon : 4
UHarry Truman : 4
IWarren Harding : 4
UBenjamin Harrison : 4
IGrover Cleveland : 4
URonald Reagan : 3
UHerbert Hoover: 3
UWoldrow Wilson : 3
UTheodore Roosevelt : 3
UBarack Obama : 2 *
UGeorge W. Bush : 2
UBill Clinton : 2
UGeorge HW Bush : 2
ULyndon Johnson : 2
UJohn F. Kennedy : 2
UChester Arthur: 2
URutherford Hayes : 2
UGerald Ford : 1
UCalvin Coolidge : 1
UWilliam McKinley : 1
UJames Garfield : 1
U-Obama akasakabonyuli ubulungisa besithathu, kwaye ahlale engaqinisekanga ukuba ukhetho lwakhe luya kuqinisekisa.
Iimpi zeNapoleonic: iMfazwe yaseSalamanca
AmaGitars aMaqabane aMaqabane aphezulu
Izihlandlo zokubhala ngokuqhelekileyo
I-Four Strange Mount Everest Stories
I-Funny Quotes Ukunyundela uDonald Trump
I-Kelp Highway Hypothesis